Nwanyị anyị nke Aparecida - WRSP
Nwanyị anyị nke Aparecida
ANYỊ LADY OF APARECIDA TIMELINE
c.1650: Frei Agnostino de Jesus, onye na-akpụ akpụ na onye mọnk carioca si Sao Paolo, mere obere ihe oyiyi Virgin.
1717 (October 12): Joao Alves, onye ọkụ azụ nke Guarantinqueta, Brazil, wụnyere ụgbụ ya na Osimiri Paraiba dị nso na Port nke Itaguago wee tụọ ozu nke ihe akpụrụ akpụ. Ya na ndị otu ya, Domingos Garcia na Felipe Pedroso, wụnyere ụgbụ ha ọzọ, na nke ugbu a wetara isi ihe oyiyi ahụ. Ha kpọrọ ihe oyiyi ahụ Lady anyị Aparecida (Nwanyị Nwanyị Anyị Pụtara).
1732: A kpụrụ ihe oyiyi ahụ na ụlọ nsọ mbụ ya.
1745: E wuru chọọchị buru ibu n'elu ugwu dị nso na Porto Itaguassu ka ọ gaa n'ụlọ ihe oyiyi ahụ.
1822: Pedro I kwupụtara nnwere onwe Brazil na Portugal wee bulie aha Nwanyị Lady Aparecida na Patroness nke Brazil.
1888: E wuru basilica buru ibu iji dochie obere ụlọ ụka nke nwere ike ịnabata ndị pilgrim 150,000 kwa afọ.
1904 (September 8): St Pius X kwupụtara Nwanyị anyị Aparecida ịbụ Queen nke Brazil. Kadinal nke Rio de Janeiro kpuchiri ya.
1930: Pope Pius XI kpọsara ya dị ka isi ọrụ Brazil.
1931 (May 31): A na-edozi Brazil maka Lady Lady Aparecida.
1931: Mgbe mwakpo ndị agha na-enweghị ọbara na-enweghị ọbara, Getulio Vargas ghọrọ onye ọchịchị aka ike nke Brazil. Dị ka ihe nnọchianya nke Brazil dị n'otu, ọ kwalitere Chọọchị Katọlik na-anọchite anya ya na Lady anyị Aparecida dị ka ihe nnọchianya ya.
1945: Vargas 'chịrị dị ka onye ọchịchị aka ike kwụsịrị; atụmatụ dị ugbu a maka basilica ọhụrụ.
1946-1955: Ewuwu malitere na nnukwu basilica nke oge a.
1959: Ndị mmadụ, na akpụrụ akpụ ahụ, bugara ha na basilica ọhụrụ, ka na-ewu ya.
1964: Ndị agha ndị agha ọzọ mere na Brazil. Ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ, gụnyere ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-ese ihe, nọ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ dọọrọ ha n'agha. "Onye isi oche" Castello Branco kpọrọ aha anyị Lady Aparecida ka ọ bụrụ onye ọchịagha kachasị elu nke ndị agha Brazil na-agbali igbochi ókè a ga-esi jiri ohere ọha na eze mee ihe.
1978 (May 16): Onye nke otu òtù Protestant rụrụ arụ oyiyi ahụ.
1980: Na atụmanya nke ọbịbịa Pope John Paul II, ọ ga-abụ na ụbọchị nke Nwanyị Achọpụtara anyị, Ọktọba 12, ka iwupụtara dị ka ezumike mba Brazil.
1980 (Ọktọba 12): Pope John Paul II gọziri ọmarịcha Ladylọ Nwanyị Nwanyị anyị.
1995 (October 12): pastọ pastọ, Sergio Von Helder, na-akwa emo Aparecida ihu ọha n'ihu ọha mgbe a na-eme ihe omume okpukpe telivishọn.
Tupu Brazil adabere na nchịkwa Spanish na 1580, Joao nke Atọ nke Portugal na-achịkwa ógbè buru ibu mana o nwechaghị ihe ọ ga - eji dozie ya. Ya mere, o kewara Brazil n'ime ndị isi ụgbọ mmiri iri na ise wee họpụta gọvanọ maka onye ọ bụla. Ndị gọọmentị nwere ike ịtụ ụtụ ụtụ na ịchị achị dịka ha chere na ọ dị mma kama achọrọ ka ha mejupụta ebe ahụ, na-akwado ndị mmadụ, ma jiri akụ ha chebe ókèala ha. A chọtara ọla edo n'ebe ndịda Central Brazil na 1695 na ihe ga-abụ ndị isi ụgbọ mmiri nke Sao Paulo na Minas Gerais, na ụgbọ mmiri na-agbanye. Ọchịchị ọhụrụ nke Sao Paulo na Minas Gerais, Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcellos, ndị Portuguese Count nke Assumar, ga-abata na ndị isi ụgbọ mmiri ọhụrụ ya, n'obodo a ga-akpọzi Aparaceda, n'October, 1717 ma nọrọ na ụzọ ya gaa na ebe ntanetị dị mkpa (Johnson 1997).
Ndị bi n'ógbè ahụ chọrọ inye onye gọvanọ ọhụrụ ahụ nnabata kwesịrị ekwesị, ya mere e zipụrụ ndị ọkụ azụ atọ n'ime Osimiri Paraiba dị nso ka ha weta nri maka emume. Nchọpụta nke akpụrụ akpụ nke mechara kpọọ Nwanyị anyị nke Aparecida na njem ịkụ azụ ahụ bụ "akụkọ ihe mere eme, akụkụ hagiography" (Johnson 1997: 125). Na Chọọchị Roman Katọlik, a na-edo ndị nsọ nsọ mgbe ha kọchara na ha hụrụ ọhụụ ma ọ bụ ngosipụta ọzọ nke Chineke (hierophany). Agbanyeghị, ụzọ Nwanyị Nwanyị anyị nke Aparecida si bụrụ onye Patroness nke Brazil dị ezigbo iche.
Azụ azụ azụbeghị hiri nne tupu gọọmentị ọhụrụ ahụ abịa, na ihu igwe dị njọ karị mgbe ụmụ nwoke gara njem ịkụ azụ. N'agbanyeghị ekpere ha na-ekpegara Nwanyị Nwanyị anyị nke Mmasị Ebighị Ebi (Virgin Mary), ọtụtụ awa Domingos Garcia, Joao Alves na Felipe Pedroso anwụghị ihe ọ bụla N'ikpeazụ, na-agbanye ụgbụ ya ọzọ, Alves na-adọkpụghị azụ, kama ọ bụ obere obere ihe oyiyi. Ihe akpụrụ akpụ a nọrọ na osimiri ahụ ogologo oge (ọ nwere ike bụrụ ihe akpụrụ akpụ nke Spanish nke Virgin nke Guadalupe site na oge Spanish na-achịkwa Brazil n'etiti 1580 ruo 1640), na, n'ihi ya, osisi nke ihe akpụrụ akpụ e ji apịtị na mmiri metọọ ya ma gbanwee ya (Johnson 1997: 126).
Ndị ikom ahụ wụnyere ụgbụ ha ọzọ wee webata isi ihe oyiyi ahụ. Ha kpochara ihe ha jidere wee kpebie na akpụrụ akpụ ha bụ otu n’ime ha Nne anyi di iche iche nke echiche di nma, Meri bu Meri. Ha na-akpọ ya Nne anyi di iche iche nke ndi mmadu bu onye si na mmiri puta, nke e mechara mee ka anyi di nwayi. Ndị ikom ahụ gbara ya n'ákwà, nọgide na-azụ azụ, n'oge na-adịghịkwa anya, ha nwere azụ zuru ezu iji nye oriri dị oké ọnụ ahịa. Ọdịdị nke Lady anyị nke Aparecida bịara dị ka ọrụ ebube abụọ. Nye ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ bụ ọrụ ebube, nke mbụ, na ndị ọkụ azụ ahụra ahụ na isi nke ihe oyiyi ahụ n'otu oge na, nke abụọ, na ịchọta ihe oyiyi ahụ na-esochi nnukwu azụ nke azụ. Ọrụ ebube a dabeere na akụkọ nke Akwụkwọ Nsọ nke Jizọs na-egosi ndị ọkụ azụ na-enweghị mmeri, na-agwa ha ka ha wụnye ụgbụ ha ọzọ, nke na-eduga ha n'ọtụtụ buru ibu.
Site n'oge nchọta ya, onye ọkụ azụ na ndị ezinụlọ ha na ndị agbata obi ya sọpụrụ ya. Felipe Pedroso weere ihe oyiyi ahụ n'ụlọ ya ebe ndị ọzọ bịara hụ ya. Mgbe ọ kwagara Porto Itaguassu, o were ya. Na 1732, nwa ya nwoke bụ Atanasio wuru ụlọ nsọ mbụ ya. Afọ iri na atọ mgbe e wusịrị ụlọ nsọ mbụ ahụ, e wuru chọọchị buru ibu n'elu ugwu dị nso na Porto Itaguassu maka Lady anyị nke Aparecido. Nke a nọgidere n'ụlọ ya ruo ihe karịrị otu narị afọ.
Pedro I kwupụtara nnwere onwe nke Brazil na Portugal na 1822 ma bulie aha Nwanyị anyị nke Aparecida na Patroness nke Brazil, nkewa nke iwu nke ụka na steeti n'agbanyeghị. Nwanyị anyị nke Aparecida ghọrọ ebe dị mkpa karị maka ndị njem okpukpe okpukpe na Brazil. Ka ọ na-erule afọ 1888, ihe dị ka ndị njem ala nsọ 150,000 na-abịa kwa afọ. Na nzaghachi, e wuru nnukwu basilica iji dochie obere ụlọ ụka. Ọnọdụ dị elu nke ọnọdụ dị nsọ sochiri. Na September 8, 1904, St. Pius X kwuru na Nwanyị Nwanyị anyị nke Aparecida bụ Queen of Brazil, Kadinal nke Rio kpuchikwara ya okpu. Naanị afọ iri abụọ na isii mgbe nke ahụ gasịrị, na 1930, Pope Pius XI kwupụtara na ọ bụ onye isi obodo Brazil, e dorokwa Brazil nsọ nye Lady anyị nke Aparecida na Mee 31 nke afọ na-esote. Na 1931, Getulio Vargas weghaara ọchịchị na Brazil mgbe ndị agha nwụsịrị ọchịchị. Mgbe ọ nọ n'ọchịchị, ọ chọrọ ike Brazil jikọrọ ọnụ wee bulie Chọọchị Katọlik nke ọkara ya na Lady anyị nke Aparecida dị ka akara ya. Ọchịchị Vargas dị ka onye ọchịchị aka ike kwụsịrị na 1945, mana ka ọ na-erule mgbe ahụ atụmatụ amalitelarị maka basilica ọhụrụ. Na 1959, a kpaliri Lady anyị nke Aparecida n'ụlọ a na-arụchabeghị. Ka ọ dị ugbu a, mgbe oge ọchịchị gọọmentị gasịrị, ọchịchị ndị agha laghachitere na 1964. Catello Branco, onye a họpụtara ịbụ onye isi ala, nke akpọrọ Lady anyị nke Aparecida ka ọ bụrụ ọchịagha kachasị elu nke ndị agha Brazil na mbọ iji gbochie otu oghere ọha ga-esi ga-eji. Mgbe emechara basilica ọhụrụ ahụ na 1980, Pope John Paul II gara ma gọzie ụlọ nsọ ya. Ọbịbịa ya mere ka e nwee iwu nke akpọrọ October 12, ụbọchị ọ ga-achọpụta, ụbọchị ezumike mba Brazil. Thegwakọta nke iwu okpukpe na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka Lady anyị nke Aparecida abụwo arụmụka kamakwa ọ pụtara na Lady anyị abụghị naanị akara nke Chọọchị Katọlik kamakwa nke Brazil dị ka mba (Johnson 1997: 129).
Ebe ọ bụ na ọ dị n'osimiri, Lady anyị nke Aparecida ejikọtara ya na ọrụ ebube mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ihe oyiyi ahụ gasịrị bu ụzọ buru ụzọ banye n'ekpere ekpere ya n'akụkụ osimiri ahụ, a kọrọ akụkọ ọrụ ebube: kandụl ndị gbawara n'ụlọ ụka ahụ ga-enwete, ohu na-agba ọsọ site n'aka nna ukwu nwere obi ọjọọ kpegaara arụsị ahụ ekpere maka nnwere onwe ma hapụ agbụ ya, otu nwa agbọghọ kpuru ìsì , na otu nwoke chọrọ imebi ihe akpụrụ akpụ a hụrụ ụkwụ ịnyịnya ya “kpọchiri akpọchi n’ime ala n’ọnụ ụzọ ụlọ ahụ” mgbe ọ gbalịrị ịbanye n’ụlọ ụka ahụ (“Our Lady Aparecida” nd). Ọzọkwa, ka a na-ewu basilica ọhụrụ ahụ, a kọrọ na kwa mgbede ọ bụla a na-akwagharị ihe oyiyi ahụ iji biri na Basilica na-aga n'ihu, mana kwa ụtụtụ, ọ na-apụta na Basilica ochie. Nke a gara n'ihu ruo ọtụtụ afọ. N'ikpeazụ, a kwenyere na ihe akpụrụ akpụ ahụ kwụsịrị ma chọpụta na ọ nweghị onye ụkọchukwu ga-ege ntị n'ọchịchọ ya ịnọ ebe izu ike ochie ya.
Ụbọchị a raara nye Lady anyị nke Aparecida agbanweela ọtụtụ ugboro n'ime afọ. Ụbọchị mbụ a na-asọpụrụ ya dị ka December 8 site na mmalite narị afọ nke iri na asatọ. Otú ọ dị, obere oge Vatican kwupụtara May ka ọ bụrụ Ọnwa nke Mary, onye ụkọchukwu ahụ kpebiri ịme ụbọchị pụrụ iche maka Ụbọchị Nwanyị anyị, ụbọchị Sunday nke ọ bụla mgbe Ista gasịrị, bụ nke ga-ada na May. Naanị afọ itoolu ka e mesịrị, na 1904, "ụbọchị gbanwere ụbọchị ahụ na Sunday mbụ nke May" (Fernandes 1985: 805). Otú ọ dị, ndị nke ụka niile amataghị ụbọchị a, ụfọdụ họọrọ iji September 7, Independence Day, kama. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na 1939, September 7 ka emepụtara dị ka ụbọchị ọhụrụ nke Aparecida. O bu ihe nwute, nke a mere ka ndi mmadu bia n'ememe n'ebube ya, o doro anya na ememe ememe n'otu ubochi ahu. Ya mere, na 1955, Nzukọ Mba nke Ndị Bishọp kpaliri ụbọchị maka oge ikpeazụ na ụbọchị ya ugbu a, October 12. Na 1980, ụbọchị a ghọrọ ụbọchị ezumike mba.
E nwere ọtụtụ ihe omume ndị pilgrim na-ekwu maka Nne Nwanyị anyị nke Aparecida na-egosipụta: nkwado, njikọta mpaghara, na nsonye. Nke mbụ bụ Nkwado, nke ndị njem ala nsọ na-efe ofufe iji chebe ha. Nke a nwekwara ike isonye na nkwa, nke ndi pilgrim nwere ike ikwe nkwa ime ihe n'aha aha anyi nke Lady Aparecida ma oburu na o nye ha ihe. Nke abụọ bụ Territorial Bond, nke ndị pilgrim na-eweta ihe ka ihe oyiyi ahụ gọzie iji melite mmekọrịta ha na Aparecida. N'ikpeazụ, e nwere Nsonye, ​​nke na-ekwu na, ebe e nwere ọtụtụ ememme ndị metụtara ndị Katọlik Katọlik, ha nile nwere njikọ na otu ihe dị mkpa. Nke a dị nnọọ iche, ma, site n'àgwà ndị pilgrim bụ ndị bịara ịhụ arụsị ahụ. Ha n'ozuzu ha na-abịa ileta ihe oyiyi ahụ na ihe ọzọ. Ha anaghị ekwupụta mmehie ha ma ọ bụ jide ọtụtụ ihe na akụkụ ndị ọzọ nke Katọlik. Na uche ha, ihe oyiyi nke Lady anyị nke Aparecida bụ naanị eziokwu ha chọrọ.
Ndị pilgrim na-akọ akụkọ ahụ pụrụ iche na ọrụ ebube na basilica. Dawsey (2006: 7) na-ede na "Ha kọwara nhụjuanya nke pagadores de promessas (ndị na-akwụ ụgwọ) bụ ndị na-agafe obe wee rigo na steepụ nke katidral na ikpere ha. Ha chetara ndị agbatị n'ala ala basilica; ha na-ekwu maka ndị ahụ na akwa, ndị ọrịa na ndị ngwụrọ, na ndị na-enweghị ọrụ. Ná ngwụsị nke okirikiri ahụ, na nkwụsị nke chọọchị ahụ, ha ahụla ikpo mkpofu - akụkọ banyere ike ịgwọ ọrịa dị iche iche nke ndị nsọ. Na sala dos milagres (ụlọ ọrụ ebube), n'etiti nnukwu ihe nchịkọta nke ihe ndị a na-achọsi ike, ha hụrụ ka ha mechie ihe ịrịba ama nke amara amara nke Nne nke Chineke.
Ọ bụ ezie na ọ bụla nzukọ gbasara nwanyị, gụnyere ebe ọ bi, otú ọ na-ejiji (a na-achọ mma uwe a na-achọ n'ubu ya na okpueze buru ibu na-achọ isi ya), nsọpụrụ na aha pụrụ iche a nyere ya, ụbọchị ezumike maka ụbọchị ememme ya na-achịkwa nkeji nke ụka Katọlik, onye nwere ike ịsị na nduzi n'ezie na ndị pilgrim nọ. Mgbe Pope John Paul nke Abụọ gara Brazil na 1980 na nkwadebe dị ukwuu iji nweta ọbịbịa nke ndị pilgrim na Aparecida ka ha kwekọọ na nleta ya, ndị isi juru anya mgbe ọ bụla karịa 300,000 nkịtị, dịka nke na-emegide 2,000,000 ndị a na-atụ anya ya. O yiri ka ndị njem ala nsọ ahụ chọrọ ịgbaso usoro omenala ha banyere Lady ahụ na ichere ruo mgbe Pope gara ụlọ nke ha iji nye ya ụtụ.
Nwanyị anyị nke Aparecida echewo ọtụtụ ihe ịma aka site n'akụkọ ihe mere eme ya. N'agbanyeghị na ọ dị elu dị ka Patros nke Brazil na ezumike kwa afọ maka nkwanye ùgwù ya, onye ọ bụla nọ na Brazil anabataghị ya. Ọtụtụ ndị Brazil nke okpukpe dịgasị iche iche egosipụtawo iwe megide ya. Ọbụna ụfọdụ n'ime omenala Katọlik kweere na ọ bụ ihe nkwụsị karịa enyemaka nye ndị kwere ekwe.
Na ihe mbụ mere, anyị jidere Nne Lady nke Aparecida n'etiti nnukwu mgba mgba. Na 1889, episcopate weghaara ebe nsọ ma kpọọ ndị ụkọchukwu si Europe ka ha nyere aka n'ịhazigharị usoro nkwenkwe ahụ. Nke a mere ka esemokwu dị ukwuu, ma "n'etiti ndị isi chọọchị na ndị isi obodo na-achịkwa nchịkwa" na "n'etiti ndị ozi ala ọzọ na Tridentine na ndị pilgrim ala" banyere ofufe (Fernandes 1985: 804). Ndị ụkọchukwu chọrọ ịchọtaghachi ndị pilgrim Katọlik, ma ha chọpụtara na ndị pilgrim ka na-eme ụfọdụ ememe ndị jọgburu onwe ha bụ ndị bụ akụkụ nke usoro nkwenkwe ha ruo ọtụtụ narị afọ ma bụrụ ndị na-eguzogide ọgwụ na mgbanwe. Dịka anyị kwurula, ndị pilgrim na-agakarị na-efe Lady anyị nke Aparecida, ma otu onye ụkọchukwu chọpụtara na "90% nke ndị 30,000 ahụ [ndị letara oyiyi ahụ] ekwupụtabeghị, ma ọ bụ otu ugboro, n'oge ndụ ha nile" (Fernandes 1985: 804 ). Chọọchị Katọlik anọgidewo na-alụso eziokwu ahụ ọgụ n'ala; mgbe Lady anyị nke Aparecida bụ akara ngosi Katọlik, ọtụtụ n'ime ndị na-efe ya adịghị esochi ozizi Katọlik.
Dika ihe nke abuo mere na 1978. Otu onye otu nke Protestant kuru Our Lady of Aparecida n’ebe okwesiri ma nwaa iji ihe oyiyi a wepuga. Achuru ya ma nwude ya, mana tupu ha jidere ya, o kwaturu ihe akpụrụ akpụ n'ala. E meziri ihe akpụrụ akpụ ahụ, mana ọ gaghị ekwe omume iweghachite njirimara mbụ nke ihu ihe oyiyi ahụ.
N'ikpeazụ, n'October 12, 1995 (nke bụ ụbọchị ememe), onye ozi ala ọzọ bụ Segio Von Helder pụtara na 25 nke Oge Awa Mmemme na Record Television Network. Na nke a, Helder katọrọ ịdị elu nke arụsị na omenala Brazil, na-ekwu na "Chineke gbanwere site na onye isi ihe nkiri gaa onye inyeaka" (Johnson 1997: 131). O wee malite ịkụ aka na iti ihe akpụrụ akpụ nke o wetara na ngosi ahụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ okike okike, omume ya ka na-akpata oke iwe n'etiti ndị na-ekiri ya. Ma onye nwe netwọkụ ma onye televangelist ahụ chere ihu n'ihu nke ụmụ amaala ozugbo. N'ime izu ndị sochirinụ, e nwere nnukwu nkwado na nkwado maka Nwanyị, nke dabara na ajọ mbunobi na iwe megide Igreja Universal, netwọ nne na nna. Igreja Universal mechara mechie ya ọnụ ma ziga ya United States.
Ọ bụ ezie na Nwanyị Nwanyị anyị nke Aparecida anọwo n'etiti etiti ọtụtụ esemokwu site n'akụkọ ihe mere eme nke Brazil, dị ka Patroness nke Brazil ọ nọgidere bụrụ akara ngosi siri ike nke ọdịnala Roman Katọlik na mba Katọlik kachasị n'ụwa na nke mba Brazil. Ọtụtụ ndị njem ala nsọ, ma ndị Katọlik ma ndị na-abụghị ndị Katọlik, na-agagharị na basilica ebe ihe akpụrụ akpụ ahụ bi. Ndị mmadụ na-eme ememe na-asọpụrụ Lady anyị nke Aparecida bụkwa ndị na-eme di na United States (Arenson 1998).
Arenson, Adam. 1998. "Ọrụ nke Nossa Senhora Aparecida Festival na Ịmepụta Obodo America Brazil." New York Folklore 24: 1-4.
Dawsey, John. 2006. "Joana Dark na Werewolf Nwanyi: Ụdị Ntugharị nke Nwanyị Anyị." Religião & Sociedade 2: 1-13.
Fernandes, Rubem César. 1985. "Aparecida, Queen's Queen, Lady and Mother, Sarava!" Ozi Sayensị Sayensị. Nweta site na http://ssi.sagepub.com/content/24/4/799 na 2 May 2014
Johnson, Paul C. 1997. "ickinggba, Stgba, na Reghagharị Onye Nsọ na Black: Ọhụụ nke oghere ọha na eze na Brazil dị nso na nso nso a." Akụkọ banyere okpukpe 37: 122-40.
Leon, Luis D. 2010. Ịkụzi Asụsụ n'Ọgbakọ. " Church History 79: 504-06.
Oliveira, Plinio Correa de. "Nne anyi di aso nke Aparecida - October 12." Nd Omenala Na-eme Ihe. Nweta site na http://www.traditioninaction.org/SOD/j227sd_OLAparecida_10-12.html na 2 May 2014
"Nne anyi di aso nke Aparecida" (Nossa Senhora Aparecida). nd Mary Pages. Nweta site na http://www.marypages.com/LadyAparecida.htm na 2 May 2014.
Yeh, Allen na Gabriela Olaguibel. 2011. "Nwaanyị nke Guadalupe: A Na-amụ Banyere Okpukpe Ndị Okpukpe" International Journal of Frontier Missiology. 28: 169-77.
Caitlin St Clair